Cartooniste Carlos Ezquerra, oo ahaa qoraa garsoore Dredd, ayaa dhintey | Abuurista khadka tooska ah
Xaqiiqdii qaarkood ma oga Carlos Ezquerra, laakiin haddii aan ka hadalno yaa ah wada-qoraha Garsoore DreddXaqiiqdii waxaan bilaabaynaa inaan siinno aqoonsi weyn mid ka mid ah kuwa ugu fiican sawir gacmeedyada. Waxay ahayd 1977 markii laga aqoonsaday adduunka oo dhan markii uu u keenay garsoore Dredd nolosha sawirka.
Waxaan ka hadlaynaa dabeecad lagu abuuray qoraaga John Wagner loogu talagalay majaladda 2000 AD. Sarkaal sharci fulin ah oo u dhaqaaqaya sidii kalluun biyo ku dhex jira magaalo mustaqbal ah oo la yiraahdo Megacity One Dabeecad dhaqameed run ah oo caan ah oo wali ku sii socota fagaaraha tirada badan ee superhero ee shaashadaha waaweyn.
Shalay, Isniinta, Oktoobar 1, 2018, waxaa geeriyooday Carlos Ezquerra, oo ku dhashay magaalada Zaragoza sanadkii 1947. Waxay ahayd XNUMX-yadii markii sawir-gacmeedka reer Zaragoza uu u shaqeynayay majaladda Ingiriiska ee loo yaqaan "Battle Picture Weekly". Dhexdeeda waad ka arki kartaa Taxanaha sida Rat Pack, Major Eazy iyo El Mestizo.
Ezquerra wuxuu ahaa mid Kaartooniistayaashii ugu horreeyay ee Isbaanish ah ee u shaqeeya warshadaha Anglo-Saxon, U gogol xaaraya oo u bannaynaya imaatinka kuwa kale oo badan oo muujiyey hibada weyn ee qaybo badan oo ka mid ah qaybahan.
Garsoore Dredd waxaa la abuuray 1977 isaga iyo John Wagner. Dabeecad in wuxuu ku dhashay isla waqtigaas Tatcherism Ingiriisiga iyo taasi waxay ku xiran tahay dabeecadaha Franco ee Spain; sida Ezquerra laftiisu u garto. Dredd wuxuu ku dhashay cambaareyntiisa gaarka ah ee kor u qaadista faashiisnimada wuxuuna soo bandhigayaa bulsho aysan xoriyado shaqsiyadeed ka sii jirin; booliisku waa garsoorayaal, garsoorayaal iyo fuliyayaal.
Kartooniste yaa dhaxal qurux badan inoo reeya iyo inuu ka mid noqon doono kuwa kartuunistayaasha sharafta leh. Waxay ku jirtay tan isla sanadkaas waxaan waynay Forges, caqli kale oo sawir leh farriin bulsho oo caan ah, sida Carlos Ezquerra.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawir gacmeed Carlos Ezquerra, oo ah wada-qoraha garsoore Dredd, ayaa naga tagaya